Joystick Arcade: akanakisa mutambo vatongi ve ako retro mapurojekiti | Mahara emahara
Joystick Arcade: akanakisa mutambo vatongi ve ako retro mapurojekiti
Isaac | | Arduino, Zvemagetsi zvigadzirwa, Raspberry Pi
Kune huwandu hukuru hwemhando dzekudzora arcade joystick yemitambo yemavhidhiyo pamusika, mimwe yacho yeiyo DIY Arcade michina, senge iwo anowirirana nemabhodhi akaita seRaspberry Pi kana neArduino. Ivo havana mutengo wakakwira, saka ivo vanozove mudziyo unonakidza kwazvo kubata ako mapurojekiti uye kunakidzwa semwana.
Kusarudza akanakisa eaya arcade joystick harisi basa riri nyore, nekuti kune huwandu hwakawanda hwadzo, uye dzimwe nguva misiyano iri pakati pavo inoonekwa nekusavapo kwavo. Asi kune vamwe vane zvidiki zvidiki zvinogona kuita mutsauko. Kana iwe uchifarira, unogona kuenderera uchiverenga kuti uone kuti ndeapi masimba aya, uye kuti ungasarudza sei akanakisa.
1 Chii chinonzi arcade joystick?
2 Chii chaunofanira kuziva iwe kusarudza yakanakisa arcade joystick yeprojekiti yako?
2.1 Mhando dzemafaro emitambo
2.2 Kuoma uye kufamba
3 Iwo akanakisa arcade mafaro aunogona kutenga
Chii chinonzi arcade joystick?
Ngatiendei nezvikamu. Chinhu chekutanga ndechekujekesa izvo mudariro mudariro. Zita rayo rinobva kuChirungu "mufaro" (mufaro) uye kamuti (tsvimbo). Aya maipiri ainyanyo kufarirwa muindasitiri yemitambo munguva yakapfuura, ndosaka nhasi ari kushandiswa zvakanyanya nevaya vanotanga kudzosera mapurojekiti.
Izvi zvishandiso zvakagadzirirwa kupa inodzora interface yehuwandu hwemitambo yemavhidhiyo, inobvumidza kubata zvinhu zvemutambo nenzira yakapusa. Kushanda kwayo kuri nyore. Lever yakasungirirwa kune rutsigiro, uye ine maX uye maY axes ane microswitches inogoneswa nekufamba kweye lever pamatemo erusununguko iyo yainobvumira. A processor ichagadzirisa masaini uye nekuadudzira iwo kufamba.
Kune rimwe divi iri izwi Arcade, ndiko kuti, iyo arcade michina iyo yakave yakakurumbira makumi mashoma mashoma apfuura uye ayo aipiwa munhandare, nzvimbo dzekutengesa, mabhawa, nezvimwe. Naizvozvo, arcade joystick yakatumidzwa zita nekuti iwo ndiwo chaiwo iwo anogona kushandiswa mune aya michina.
Chii chaunofanira kuziva iwe kusarudza yakanakisa arcade joystick yeprojekiti yako?
Zvikurukuru zvinoenderana nerudzi rwechirongwa kuti iwe uchazogadzira. Iwe unogona kufarira imwe kana imwe, asi vashandisi vazhinji vanoishandisa kuti vagadzire yavo yakachipa retro michina vachishandisa Raspberry Pi uye nekudaro vanokwanisa kutamba mune yakatonyanya chokwadi nzira. klassiske vhidhiyo mitambo uchishandisa emulators.
Kune rimwe divi, zvinoenderana ne urikutsvagei, pane maviri akakosha maitiro anomira kunze kune vamwe pavanosarudza yakanaka arcade joystick ...
Mhando dzemafaro emitambo
Mukati meiyi arcade joystick kune yakawanda mhando. Chaizvoizvo misiyano iri mune aesthetics kana chimiro cheaya masimba.
MaAmerican (Yakareba mubato): Iyi mhando yeArcade joystick ine mubato wakareba, wakaumbwa kunge lever. Vamwe vanozvisarudzira seizvi kuvabata nechanza cheruoko kuti vaite mafambiro. Mune ino kesi, ivo vanowanzo kuvezwa kumadziro epaneru.
ChiJapanese (Bhora-mhando mubato): ivo vane chimiro chebhora, uye iwe unogona kuvabata zvakasiyana neveAmerica, uchingoshandisa minwe yako. Iyo inyaya yekuravira kana mhando yeArcade muchina wauri kuyedza kutevedzera. Mune ino kesi, ivo vanowanzo kuve vanobatanidzwa muchitsime chemuchina.
Ngazvive sezvazvingave, ivo vese vanowanzove neyakaenzana yemukati mashandiro. Vane vana microswitches kuona yega yega yekufamba kwe4 inobvumidzwa neye lever axis. Imwe neimwe inogadzirwa nekufambisa lever munzira yakatarisana nayo.
Kuoma uye kufamba
Izvo zvinotonyanya kukosha kupfuura mhando, nekuti mashandiro eaya anozonyanya kutsamira pamiparamendi miviri iyi. Ini ndinotaura nezve kuoma uye kufamba yerudzi urwu rwearcade joystick.
Kuoma: isimba raunofanira kufambisa lever kuti ushandise joystcik.
Kufamba: ndiyo huwandu hwedaro iyo mubati kana lever inofanirwa kufamba kubva pakati (zororo nyika) kusvika panoshanda iyo microswitch kuburitsa imwe mhando yekufamba.
Kuti uzive mhando yeukukutu uye nzira yekusarudza iwe yaunofanirwa ive yakajeka nezve mhando yemutambo wevhidhiyo kwauri kuenda kunotamba. Kana paine akati wandei, iwe unofanirwa kufunga nezve iyo genre yauri kuzonyanya kuitisa. Semuyenzaniso:
Kurwisa mitambo yemavhidhiyo kana mota: Muzviitiko izvi, seMortal Kombat, Street Fighter, Space Inopinda, Hondo Guta, nezvimwe, zvakanakisa kusarudza arcade joystick nekukura kukuru uye nekufamba kushoma. Nenzira iyoyo iwe unozodzora mafambiro zvirinani uye nekugadzira iwo chaiwo chaiwo.
Platform mavhidhiyo emavhidhiyo: mitambo yemavhidhiyo senge Sonic, Mario Bros, nezvimwewo, izvo zvinodikanwa kugona kukuru, nekuti iko iko kufamba kwekukosha hakuna kukosha mune idzi kesi. Kune aya mazita, iwo akakodzera iwo epakati-akareba uye akapfava kosi.
Kana iwe ukatamba ese marudzi emavhidhiyo mutambo genres zvishoma, iwe ungangodaro unofarira arcade joystick nayo kuomarara uye nzira yepakati izvo zvinokutendera iwe kuti utambe zvakanyanya kana kushoma zvakaringana mumarudzi ese emazita. Uye zvakare, kana iwe uchida kureruka kukuru, iwe ungangodaro unofarira kune yakatounganidzwa uye yakazara control panel senge iyo yakapihwa MyARCADE uye kunyange mamwe akazara uye anodhura Arcade michina:
Tenga mini Arcade muchina nemitambo mazana maviri nemakumi mashanu
Tenga mini Arcade muchina nePac Man
Tenga mini Arcade muchina neBad Dudes
Iwo akanakisa arcade mafaro aunogona kutenga
Mukati memusika uyu, unogona simbisa mamwe marudzi eArcade joystick izvo zvinomira kupfuura zvimwe zvese:
Kune ese marudzi emavhidhiyo mutambo mhando: yakanaka yekutamba ese mavhidhiyo emitambo mauri kutyaira ngarava, mota, kurwa mitambo yemavhidhiyo, uyezve chikuva mitambo. Ivo vane wepakati kuomarara uye kufamba kuti vape mhedzisiro yakanaka nechero zita.
Kutyaira mota uye kurwisa mitambo yemavhidhiyo: iyi arcade joystick ine yepakati-refu kufamba, ine kutsetseka kunozoita kuti kufamba kwako kuve kwakanyatso nyatso kuitira kuti mutambo wako uve chiitiko chakanakisa, kuzadzikisa kuita kwauri kutsvaga.
European arcade joystick EG INOTANGA
Yakazara kit: Iwe zvakare uchawana mamwe mapakeji ayo anosanganisira maviri arcade joystick uye mabhatani, pamwe newaya uye kutonga maPCB, kuitira kuti iwe uve nezvose zvaunoda kuti uunganidze yako DIY yekudzosera arcade chirongwa.
EG ANOTANGA Kit
Kuti ubatanidze neRaspberry yako Pi, mamwe emapulagi aya ane kubatana USB yekumhanyisa kuitisa pasina kukosha kwekuwedzera kodhi kana kushandisa mamwe emagetsi, kana kunetseka nezveGPIO pini, nezvimwe. Zvichava nyore sekuzvimisikidza netambo dzakabatanidzwa uye zvinhu, kuzvisanganisa neimba kana rutsigiro rawakavagadzirira, nekubatanidza tambo kune yakasarudzwa SBC bhodhi kuburikidza ne USB port. Panyaya yaArduino zvaisazove zvakadaro, nekuti pakadaro zvingave zvakafanira kugadzira sketch uye kuita kuti bhodhi rione kufamba uye kuita chimwe chiito ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Mahara emahara » Zvemagetsi zvigadzirwa » Joystick Arcade: akanakisa mutambo vatongi ve ako retro mapurojekiti
HC-SR501 - Arduino Inoenderana IR Motion Sensor